Fikarohana momba ny firaisana Grace VanderWaal, mpanoratra sy mpihira ho an'ny ankizy ho toy ny fanambaràna indray ny fitambaram-ben'ny George Beatrix George Harrison: Ny fitiavan'i Ukulele amin'ny roa tapa-bolana - Fikarohana momba ny vatana
Natolotr'i: Mike W. avy any Florida
Notohanana tamin'ny: Ahtun Re ao amin'ny Ryerson | Semkyw Reenkarnation Research Session
Mpanakanto sady mpamoron-kira mpamokatra ankizy, Grace VanderWaal, Nahazo ny talenta amerikanina
Grace VanderWaal dia nanjary fahatsapana tany Etazonia rehefa nahazo ny fotoana fahiraika ambin'ny folo izy America's Got Talent tamin'ny taona 12 tao amin'ny 2016. Ny ampahany tsy manam-paharoa amin'ny hetsika mozika dia ny fiarahany mihira miaraka amin'ny ukulele.
Tamin'ny taona 2018, mpanohana ny ReincarnationResearch.com, izay milaza ny tenany ho Mike W. avy any Florida, no nanoratra tamiko nampita ilay fiheverana fa i Grace dia mety ho teraka ao amin'ny vatana vaovao indray i George Harrison, mpitarika gitara an'ny tarika angano, The Beatles.
Grace VanderWaal ho fampianaran'i George Harrison
Nanipika i Mike fa Grace, ho toy ny mpamoron-kira, dia efa nandroso tsara nandritra ny taonany. Nolazainy ihany koa ny zavatra tsy fantatro, fa i George Harrison dia tia ny ukulele ary nitondra "akanjo" na aiza na aiza nalehany. Ny taratasy nosoratan'ny tanana nosoratan'i Harrison momba ny fitaovana tiany dia omena etsy ambany ary ny rohy mankany amin'ny horonan-tsarin'i Harrison milalao ny ukulele dia omena ny faran'ity lahatsoratra ity. Kitiho ireo sary mba hampitombo azy ireo.
Mike dia nanamarika ihany koa fa i George Harrison dia nanangana ny feon-kira tamin'ny sarimihetsika mitondra ny lohateny Wonderwall ary satria nanana vazivazy mahatsikaiky i George, dia mety nanapa-kevitra ny hiditra ao amin'ny fianakaviana iray antsoina hoe VanderWaal ny fanahin'i Harrison. Misy porofo marim-pototra fa mieritreritra fiainana an-tsitrapo ny fanahy. Mba hamerenana ity porofo ity, azafady mankany:
Ny firaisana amin'ny vatana vaovao sy ny fanombohana ny Fahatongavana ho nofo
Misy porofo koa fa ny olon-drehetra dia afaka manana ny endriky ny endriky ny endrika iray na mitovy amin'ny fiainana iray mankany amin'ny iray hafa. Nandinika aho fa ny Grace sy i George Harrison dia manana rafitra ara-tarehimarika tsy tapaka.
Nandritra ny fivoriana iray nataoko tamin'ny alalàn'ny fampahalalam-baovao Kevin Ryerson, ny torolalan'ny fanahy Ahtun Re, izay nampiseho ny fahafaha-manao ny fiainana teo aloha, dia mifanaraka fa ny Grace VanderWaal no toeran'ny vovoka indray ny an'i George Harrison. Harrison, eny an-dalana, dia tena liana amin'ny kolontsaina India, izay ahitana ny finoana ny fototra ao amin'ny vatana hafa. Izany angamba no ninoan'i Harrison tamin'ny nahaterahan'i Jesosy.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny Grace sy George Harrison dia mitovy.
Fiainana Talenta-Fitaizan-janaka: Ny mozika George Harrison dia mamirapiratra ao anatin'ny fahatsiarovana an'i Grace VanderWaal.
Saripikan'i George Harrison nilalao ny Ukulele